(OMN:Oduu Adol.11, 2016)---Mootummaan Itoophiyaa qorumsaa seensa yuuniversiitii kutaa 12ffaa waliin wal-qabsiise, tajaajila sabaa himaalee kanneen akka Facebook,Twitter, viber fi kanneen biroo cufu isaa BBC’n gabaase.
Kun osoo kanaan jiru, miidiyaaleen tokko tokko yeroo darbe qormaanni marsaa 2ffaas miliqfame bahe jira jechuun qalbii barattootaa mancaasa kan turan ragaa sobaa tahuun isaas beekkame jira.
Mootummaan Itoophiyaa qormaata seensa yuuniversiitii kutaa 12ffaa sababeefachuun, tajajiila interneetii biyyitti keessatti cufu isaa BBC’n gabaasa isaa kanaan beeksise.
Akka ministeerri dhimmoota koomunikeeshiinii mootummaa Itoophiyaa Obbo Geetaachoo Reddaa yaada isaanii BBC’f ibsanitti, yeroo darbe qormaannii kutaa 12ffaa miliqee bahu isaa fi miidiyaalee hawaasaan namoota hedduu biraatti argamu fi dubbifamuun hedduu waan isaanii gufachiseef murtoo tajajila interneetii addaan kutu murteessu dubbatu.
Akka gabaasa BBC tti, mootummaan Itoophiyaa tajajila interneetii cufuu qofa osoo hin taane, namootaas tahee dhaabbiilee dhimma mirga namooma irratti qeeqaa fi yaada isaanii faallaa siyaasaa mootummaa biyyitti barreessuun maxxansan jala cufuu fi hidhuun ardii Afrikaa irraa adda durummaan akka wamamuus eere jira.
Kan kaleessaas tahe har’aa haala sochii Oromiyaa keessatti gaggeefamaa jiru ukkamsuuf, miidiyaaleen hawaasa cufama turan hoo ministirri koomunikeeshinii kun maal jedhu isaa jedhuuf immoo, biyyittiin walabummaa miidiyaa jettee waggaa irra gara waggaatti kabaja jiraachuu argina malee, qabatamaatti jiraachuu isaa quba hin qabnu jechuun gaazexeessitonni biyyitti dhimmicha BBC’n gahan jiru.
Mootummaan biyyitti yoo tajajila interneetii guuutummaan guutuutti kan cufu tahe, jaarraa 21ffaa yommuu addunyaan balbala tokkon baha jirtu kana keessatti waan ittiin mootummaa kana jilbefachifne mo’achuun odeeffannoo sabaa keenya bira geenyu karaa hedduttu jira jechuun kan dubbate Obbo Jawar Mohammed, daarikteera OMN.
Obbo Geetaachoo Reddaa garuu dhimmi cufamuu miidiyaa hawaasaa kun hanga guyyaa Roobii qofa jechuun wakkatanii jiru.
Kun osoo kanaan jiru, ragaan ministeera teekinoloojii fi qunnamtii biyyittii (ICT) irraa arganne garuu lammiilee biyyittii fayyadamtoota qunnamtii teekinoloojii gochuudhaan karooraa guddinnaa fi Tiransformeshiinii 2ffaa dhugoomsuuf, ICT’n shoora guddaa gumaacha.
Ministeerri kunis mul’inna isaa dhugoomsuuf hojjechaan jira jedhuus gochoota akkas yommuu agarru immoo, yaadonni wal-falleessan biyyittii olaantumaan paartii tokko keessaa jiru keessatti garaagarummaan bal’ate calaqqisuu isaa hubachun danda’ama.
Gabaasa BBC fi gocha mootummaan Itoophiyaa miidiyaalee hawaasaa cufuu isaa kana irratti yaada maal qabda jenne wayita Jawar gafannuus akkas jechuun dubbata.
Dhimma qormaanni kutaa 12ffaa yeroo darbe miliqfamee bahuu waliin wal qabatee, qarshii miliyoonaa 200 oli kan kasaare mootummaan Itiyoophiyaa, sodaa fi ofitti amanamumma icciitii isaa eegsisuu, qondaltoota biraa waan dhaabeef tajajiila miidiyaalee hawaasaa cufuuf akka dirqaamees, haasaa Obbo Geetaachoo Reddaa irra hubachuun danda’ame jira.
Sodaa mootummaa kana gidduu galeessaa taasifachuun, miidiyaaleen tokko tokkos carraa kanatti dhimma bahuun, qormaanni kutaa 12ffaa marsaa 2ffaa harka keenya galee jira jechuun balballoomsuu isaanitiin dhaggeettii argachuuf carraquun isaaniis ni yaadatama.
Gabaasa isaanii kanaanis, waan barattootaaf yaadan fakkeeessuun itti aantumma isaanii mul’isuuf yaalanis, barattoota qorumsaa kanaaf dhiyaatanitti caalattu yaadaan dhiphisuun sirrii akka hin taane xiinxaltoonni tokko tokko dubbataa jiran.
Yaada miidiyaalee kanneen gidduu galeessaa taasifachuun namoonni dhuunfaas ilaalcha fi tilmama isaanii kallattii garaagaraan ibsa jiraachuun isaaniis beekkame jira.
Yaadotaa wal falmisiisaa ta’ee fi barattoota qorumsaaf qophaahaa turan burjaajesse kanarratti Jawaar yoo dubbatu.
Qorumsi kutaa 12ffaa barnootaa Ingiliffaa koodiin isaa 18 jedhamaa ture, qormaata guyyaa har’aa kennameen koodiin isaa 55,56,57 fi 58 tahu fi qabiyyeen isaas adda addaa tahuun immoo osoo hin jiraatin, jiraachuuf carraquu miidiyaalee kanneen fi soba isa mul’isa jechuunis dubbatamaa jira.
Posted by Hasan Ismail at 12:35 PM